Musharax U Taagan Xilka Madaxtinimada Kooxda Barcelona Oo Sheegay In Magaca Messi Loo Bixin Doono Garoonka Barcelona Ee Camp Nou
HomeHoryaalka SpainMusharax u taagan xilka madaxtinimada kooxda Barcelona oo sheegay in magaca Messi loo bixin doono garoonka Barcelona ee Camp Nou
November 28, 2020 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Musharaxa madaxweynaha Barcelona Emili Rousaud ayaa sameyneysa wax walbo oo ay ku soo jiidaneyso codadka.
Waxa uu haatan soo jeedinayaa inuu Camp Nou u bixiyo magaca Lionel Messi wuxuuna sheegay inuu ku dhow yahay tababare firfircoon oo ka socda “mid ka mid ah kooxaha ugu fiican Yurub”.
Horaantii sanadkaan, madaxweynihii hore ee Barcelona Josep Bartomeu ayaa ku dhawaaqay in isaga iyo xubnaha kale ee guddiga in ay iscasilayaan. Bishii Janaayo, waxaa jiri doonta doorasho lagu magacaabayo guddi cusub halkaas oo Victor Font loo arko kan ugu cadcad xilligan. Musharaxa kale waa Emili Rousaud wuxuuna sameynayaa wax walba oo cusub si uu codadka u soo jiito.
Mar sii horeysay, Rousaud wuxuu balan qaaday inuu keeni doono Neymar iyo ciyaaryahan kale oo weyn oo caan ka ah horyaalada qaarada Yurub.
Xiddiga Barcelona Lionel Messi ayaa cadeeyay inuu doonayo in oo ka tago kooxda, ​​laakiin haatan Rousaud wuxuu aaminsan yahay inuu sameyn doono wax walba si 33 jirkaan qandaraaska loogu kordhiyo. Rousaud wuxuu balanqaaday inuu magaca Camp Nou ku bedeli doona magaca Messi .
– Waxaan qaban doonaa afti loo qaado in magaca garoonka loo badalo “Camp Nou – Leo Messi”, ayuu yiri sida ay qortay jariirada Marca.
Emili Rousaud ayaa sidoo kale taageeri doonta tababaraha haatan ee kooxda Barca Ronald Koeman, laakiin hadii ficil loo baahdo la imaan waayo shaqada ka diri doono.
– Aad ayaan u ixtiraameynaa shaqada Koeman, laakiin haddii uusan wax hormar ah ku hogaamin kooxda, waxaan baadi goobi doonaa tababare firfircoon oo mid ka mid ah tabarayaasha ugu fiican Qaarada Yurub sidookale maamula kooxaha ugu fiican Yurub, ayuu yidhi Rousaud.